Faroe ကျွန်းများ၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသို့ ဦး တည်ရာ ခရီးသွားသတင်း
Faroe ကျွန်းများ, ဒိန်းမတ်အတွက် ဦး တည်ရာ
Mariela Carril | | ဒိန်းမတ်, ကျွန်းများ
သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင် စွန့်စားမှုခရီးသွားလုပ်ငန်း, အပြင်မှာနှင့်သဘာဝကဝိုင်း, ဒီခရီးသွား ဦး တည်ရာကိုသင်တို့အဘို့ဖြစ်၏: ဖရိုးကျွန်းစုများ။ ၎င်းသည်လှပသောကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည် ဒိန်းမတ်.
သူတို့ကို "ကျွန်းကျွန်းများ" ဟုလည်းလူသိများပြီးစုစုပေါင်းဖြစ်သည် မြောက်အတ္တလန္တိတ်တွင်တည်ရှိသောကျွန်း ၁၈ ကျွန်း။ ဤတွင်သင်သည်တောင်တက်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ ငှက်များကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ရေငုပ်ခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်း၊ သွားလား
ကျွန်းများ စကော့တလန်၏အနောက်မြောက်ဘက်မိုင် ၂၀၀ ခန့်ရှိသည်, အိုက်စလန်နှင့်နော်ဝေအကြားတစ်ဝက်လမ်း။ သူတို့သည်နော်ဝေနိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးသော်လည်းယနေ့သူတို့သည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်းများ ကျောက်ပေါသော၊သူတို့၏မိုးကောင်းကင်များ၌ထာဝရတိမ်များနှင့်အတူတစ်နှစ်တာအအေးမိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကပြောကြားခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်းပေါင်း (၇၀၀) ကျော်ရှိသော်လည်းအဓိကကျွန်း (၁၈) ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၆၀ ခန့်ကဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ဂရင်းလန်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်အချိန်မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဒီနေရာကိုရယူပါ အရမ်းလွယ်တယ်သူတို့ဘယ်လောက်ဝေးနေပါစေ ရောက်နိုင်တယ် လေယာဉ်ဖြင့် နေရာများစွာမှပါရီ၊ ရီယာဂျာဗစ်၊ အက်ဒ်ဘာ့ဂ်၊ ဘာဂန်၊ ကိုပင်ဟေဂင်နှင့်ရာသီဥတုပေါ် မူတည်၍ ဘာစီလိုနာ၊ ဂရင်းကင်ရာရီယာ၊
ကျွန်းများသို့ပျံသန်းသောလေကြောင်းလိုင်းများဖြစ်သည် စကင်ဒီနေးဗီးလေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတ္တလန္တိတ်လေကြောင်းလိုင်း နှင့်သင် ဦး တည်ရာအရပ်သို့ပိုမိုနီးကပ်စွာသင်လေယာဉ်စီးသည်, လေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန်တိုတောင်း။ ဥပမာအားဖြင့် Bergen (သို့) Edinburgh မှသင်တစ်နာရီအတွင်းသင်ရောက်ရှိနေသည်။ နောက်ဆုံးအားဖြင့် ကူးတို့ဖြင့် ဟုတ်ကဲ့သင်အဲဒီကိုရောက်နိုင်ပေမဲ့အိုက်စလန်ဒါမှမဟုတ်ဒိန်းမတ်ကနေရပြီ။ Smyril လိုင်းမှာဒီဟာနှေးနေပေမဲ့ချစ်စရာကောင်းတယ်
အကယ်၍ သင်သည်ကူးတို့ဖြင့်သွားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်ယူရို ၇၀၀ ခန့်ကုန်ကျနိုင်သည်။ ယခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်နံနက်စာ၊ နေ့လည်စာနှင့်ညစာသုံးဆောင်ခြင်းခရီးစဉ်သည်ခန့်မှန်းနှုန်းဖြစ်သည်။ ကားတစ်စီးမရှိဘဲလူတစ် ဦး တစ်ယောက်နှင့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းအချို့နှင့်အပြန်အလှန်လည်ပတ်ခြင်းကြောင့်စျေးနှုန်းများအတွက်သင်တစ် ဦး ချင်းအခန်းတွင်သွားနိုင်သည်။
ကူးတို့ဖြင့်ခရီးသွားသူများသည်များသောအားဖြင့်သူတို့၏ကားနှင့်လာကြသော်လည်းသင်လေယာဉ်ဖြင့်ရောက်လာလျှင် တစ်ချိန်ကကျွန်းများသို့သင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးသို့မဟုတ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးငှားနိုင်သည်။ ကျွန်းများသည်ကောင်းစွာဆက်သွယ်မှုရှိသည် လမ်းကြောင်းများနှင့်တံတားများနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ ဒါကြောင့်ဒီမှာလှည့်ပတ်ဖို့အကြီးပါပဲ။ အဲဒီမှာဓာတ်ဆီဖြည့်ဖို့ဘူတာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာကြာအားသွင်းဖို့သူတို့အကြားအကွာအဝေးကိုသတိထားရမယ်။ ပင်လယ်အောက်ရှိဥမင်လိုဏ်ခေါင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်ခုစလုံးရှိပြီးနှစ် ဦး စလုံးသည် DKK ၁၀၀ ဖြင့်သေဆုံးကာ ၁၃ ပတ်ပတ်လည်ခရီးစဉ်အတွက်ဖြစ်သည်။
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခု Vágatunnilin, လေဆိပ်တည်ရှိရာဗာရာကျွန်း, Streymoy ကျွန်းနှင့်ဆက်သွယ်။ အခြား NoraoyatunnilinBoraoy ကျွန်းနှင့် Eysturoy ကျွန်းကိုဆက်သွယ်သည်။ ၎င်းတို့တွင်အကောက်ခွန်ပြခန်းမပါသော်လည်းထိုလိုဏ်ခေါင်းကိုသုံးရက်အတွင်းသုံးလအတွင်းဓာတ်ဆီဆိုင်များတွင်ပေးချေသည်။
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြင့်လူတစ်ယောက်လည်ပတ်နိုင်ပါသလား? ဟုတ်တယ် ဒါကြောင့်အကျိုးရှိစွာနှင့်အတော်လေးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကူးတို့များကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ပြည်နယ်ကထောက်ပံ့ပြီး DKK ၁၅ ကုန်ကျသည် Multi- ခရီးသွားကဒ်များဥပမာအားဖြင့် DKK 500 အတွက် ၄ ရက်ခရီးသွားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုဘတ်စ်ကားများနှင့်ကူးတို့များတွင်အသုံးပြုသည်။ ခရီးသည်တင်ဘတ်စ်ကားများလည်းရှိပြီး DKK 125 အတွက်ရဟတ်ယာဉ်အနည်းငယ်စီး။ ပင်သင်စီးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုများအပြင်မည်သည့်ဆိုဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သနည်း။ ကျွန်းအားလုံးတွင်ဘဏ္somethingာရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားလျှင်အခြားသူများထက်လူကြိုက်များသောနေရာများရှိသည်။
Gjògv Eysturoy ကျွန်းပေါ်ရှိကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ဒါဟာစိတ်ကူးရှိပါတယ် မီတာ 200 ရှည်လျားသောချောက်ထဲ ရွာကသူ့ဆီကနေသမုဒ္ဒရာအထိပြေးတယ်။ ၎င်းသည်တောင်များဝန်းရံထားသည့်လှပသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးနေထိုင်သူ ၅၀ အောက်သာနေထိုင်သည် သစ်သားအိမ်များနှင့်မြက်ခေါင်မိုး။ လှပသောလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်လုံး၊ တည်းခိုခန်းတစ်ခန်းနှင့်စခန်းချနေရာတစ်ခုကိုခံစားရန်ပတ်ပတ်လည်လမ်းကြောင်းများရှိသည်။
နောက်ထပ်အထူးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည် မြစ်ကြီးနား, တူညီတဲ့အိမ်၏စတိုင်နှင့်ကောင်းတဲ့အတူ ဖာရို Mykineshólmurကျွန်း၏အစွန်အဖျားတွင်ရှိသည်။ ဝေးလံသောကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည် တောင်ကုန်းများ၊, ပင်လယ်နှင့်အခြားကျွန်းများအပေါ်အလွန်ကြီးစွာသောအမြင်များနှင့်လည်းတစ် ဦး ငှက်စောင့်ကြည့်ဘို့ပရဒိသု။ ၎င်းသည်ဖာရိုးကျွန်းစုများမှအဝေးဆုံးသောနေရာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်မေလ ၁ ရက်မှသြဂုတ်လ ၃၁ ရက်အကြားသွားလျှင်သင်ကူးတို့သင်္ဘောသို့ DKK ၁၀၀ ပတ်လည်ငွေပေးရမည်၊ ရွာကိုကျော်။ မီးပြတိုက်သို့ထပ်မံ DKK 1 ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ငွေအားလုံးကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ငှက်၏။
Tinganes သည်မြို့တော်Tórshavn၏သမိုင်းဝင်အချက်အချာဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်ပါလီမန်တစ်ချိန်ကကျင်းပခဲ့သောနေရာအားလုံးတွင်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးဟုဆိုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အေဒီ ၉၀၀ ခန့်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာအရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များအားဆွေးနွေးရန်နွေရာသီတိုင်းတွင်ဗိုက်ကင်းပါလီမန်မှစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဆိပ်ကမ်းကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားသည့်ကျွန်းဆွယ်အလယ်ဗဟိုကျွန်းဆွယ်တွင်တည်ရှိသည်။
သမိုင်းဝင်စင်တာကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားပြီးထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းအားအားလုံးထိန်းသိမ်းထားသည် တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်း အလယ်ခေတ်။ သို့သော်သင်ကဲ့သို့သောအခြားဆိုဒ်များသို့လည်းသွားရောက်နိုင်သည် Faroe သမိုင်းပြတိုက်၊ Nordic အိမ်၊ သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်၊ အမျိုးသားပြတိုက်၊ Tórshavnဘုရားရှိခိုးကျောင်း ...
skansin ဒါဟာမြို့တော်၌တည်ရှိ၏နှင့်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် XNUMX ရာစုကနေအဟောင်းခံတပ် အရာပင်လယ်ဓားပြတိုက်ခိုက်မှုကနေမြို့ကာကွယ်ရေး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာရှိခဲ့ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်ပြင်သစ်ပင်လယ်ဓားပြများသည် ၁၆၇၇ တွင်သိုး ၂၀၀၊ လက်အိတ် ၅၀၀ နှင့်အိတ် ၁၂၀၀ ကိုတောင်းဆိုပြီးနောက်မူလခံတပ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ပင်လယ်၏အံ့သြဖွယ်အမြင်များ။
ကျွန်းများ၏ဂန္ပို့စကတ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Vestmanna ကမ်းပါး။ ဤသည်ဗက်ဂတ်တန်လင်းဥမင်မတည်ဆောက်မှီတိုင်အောင်ရေပန်းစားသောဆိပ်ကမ်း Streymoy ကျွန်း၏အနောက်ဘက်ရှိမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းသည်၎င်း၏စိတ်ကူးချောက်ကမ်းပါးများအတွက်ရေပန်းစားနေဆဲဖြစ်သည် လှေအားဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ငှက်များနှင့်ဂူများကိုသင်တွေ့နိုင်ပြီးသင်၏အသက်ရှုခြင်းကိုဒေါသထွက်စေသောဒေါင်လိုက်ချောက်ကမ်းပါးများ၌သင်ရှိနေသည်။
သင်မြင်သည်အတိုင်း, ဖာရိုကျွန်းစု၏ဆွဲဆောင်မှုအများအပြားပင်လယ်နှင့်၎င်း၏ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ဆက်စပ်သောရှိသည်နှင့်ငါတို့ဤစာရင်းထဲတွင်ထည့်ပါ Beinisvord, Risin, Kirkjuour သို့မဟုတ်Sorvágsvatnရေကန်, "သမုဒ္ဒရာပေါ်ရှိရေကန်" သို့မဟုတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်အား Gjógv၏ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့။ ထိုအခါငါလှပသောမမေ့မလြော့ပါ Múlafossurရေတံခွန်, Gásadalurရွာ၌တည်၏။
ကြည့်ရှုရန်နှင့်လုပ်ဆောင်ရန်အရာအားလုံးအမြဲရှိသည်။ ၀ တ်ရုံကောင်းတစ်ချောင်းနှင့်အမြဲကင်မရာကိုင်ထားသောအရာ၊ ဤလည်ပတ်မှုကကျွန်ုပ်တို့အားပေးမည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံများကိုသိမ်းဆည်းရန်ထိန်းသိမ်းထားရန်နှလုံးသားဖြင့်အမြဲရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » ဒိန်းမတ် » Faroe ကျွန်းများ, ဒိန်းမတ်အတွက် ဦး တည်ရာ
အဘယ်အရာကိုAvilés, Asturias တွင်ကြည့်ရှုပါ